राजधानीमा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू, गाडी कम चल्दा सर्वसाधारणमा सास्ती ! - Everest Dainik - News from Nepal
राजधानीमा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू, गाडी कम चल्दा सर्वसाधारणमा सास्ती !
काठमाडौ‌ं, मंसिर १३ ।
बिहीबारदेखि चार दिनसम्म राजधानीमा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको छ ।
आज बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणालीको कारण राजधानीमा निकै कम गाडी चलेका छ ।
शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म काठमाडौंमा हुने एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा आउने पाहुना तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुविधाको लागि बिहीबारदेखि आइतबारसम्मका लागि काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो व्यवस्था मिलाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंले जनाएको छ। बिहीबार र शनिबार बिजोर सवारी र शुक्रबार तथा आइतबार जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छ।
याे पनि पढ्नुस गर्नु गर्यो मेलम्चीको पानीले
महाशाखाले सूचना जारी गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो । सवारी साधनको अन्तिम अंकको आधारमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो । अत्यावश्यक सेवा र शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली अनिवार्य नगरिने महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
एसिया प्यासिफिक समिटमा भाग लिन म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर (परराष्ट्रमन्त्री) आङ साङ सुकी, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसहितका अतिथि काठमाडौं आउँदै छन् ।
तर, सर्वसाधारणले भने जोर विजोर प्रणालीले सास्ती पाइएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।